Hotel DusitD2 ayaa dib loo furay kadib weerarkii Al-shabaab oo 6 bilood laga joogo. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Hotel DusitD2 ayaa dib loo furay kadib weerarkii Al-shabaab oo 6 bilood laga joogo.
Last updated Aug 1, 2019 468 0
Ka dib markii ay la kulmeen weerar dhiig badan uu ku daatay oo kaga yimaday xarakada shabaabul mujaahidiin bishii janaayo ee sanadkaan ayaa hoteelka dusitD2 ee magaalada Nairobi dib loo furay,waxaana xaflada furitaanka kasoo qeybgalay wasiiro katirsan dowladda Kenya iyo Ajaaniib kale.
“Waxaan dib ugu noqonay meheradii” ayuu yiri, Maamulaha Hoteelka.
Waxuu muujisay kalsooni ah in dib hotelka uu usoo ceshto macaamiishii uu lahaa ka hor weerarka.
“Waxaan heleynaa taageero badan in kasta oo ganacsiga Nairobi uu hooseeyo”ayuu raaciyay hadalkiisa.
Si loo soo jiito macaamiil badan, wuxuu maamulusha sheegay in hoteelku uu bixin doono qiimo dhimis boqolkiiba 20.
Inuu soo kabsado hoteelka ayaanan ahayn wax sahlan si kasta oo qiimo dhamis loo sameeyo maadaama wali ammaanka uusan lahayn damaanad buuxda.
Qeyb kamid ah shaqaalaha udhashay Kenya iyo kuwa shisheeyeba ee ka shaqeeya Hoteelka ayaa goobta ku sugnaa iyagoo ka walaacsan inay ku laabtaan shaqada xili aad loo adkeeyay ammaanka hoteelka.
waxaa kaloo jira shaqaalle kale oo aanan wali soo shaqo galin iyagoo aanan isku haleyn karin ammaanka hoteelka maadaama dhagahooda uu ka guuxayo weerarkii dhacay oo ay ku waayeen qaar kamid ah asxaabtooda.
Rusin Chilande oo 35, islamarkaana ka shaqeyneysay dhismaha 14 Riverside oo ka kooban hotel maqaayad iyo xafiisyo ayaa sheegtay inaysan soo laaban karin maadaama ay dib usoo milicsanayso xasuus xun oo uu ku reebay weerarka Alshabaab.
“Dusit? Maya, kuma noqon karo halkaas,” Chilande ayaa sidaasi u sheegtay Tv-ga Al Jazeera
“Waxaa jirtay maalin aan dib ugu laabtay hoteelka si aan alaabtayda uga soo qaato xafiiska,Wadnahaygu wuxuu ku dhawaaday inuu istaago. Haddii aan ku laabto halkaas waan baqayaa mar walba.” ayay raacisay hadalkeeda gabadhaan oo udhalatay Kenya islamarkaana ka shaqeyneysay Hoteelka.
Shirkadaha qaar oo xafiisyo ku lahaa Hoteelka ayaa ka guuray iyagoo dhisanaya dhismooyin kale si ay kaga badbaadaan qasaare kale oo kasoo gaara xarakada shabaabul mujaahidin.
Kenya, oo ah xarun ay ku badan yihiin dowlado shisheeye,Hey’ado gaar loo leeyahay iyo kuwa Qaramada Midoobay, ayaa bartilmaameed u ah weerarada xarakada Mujaahidiinta Al-shabaab wixii ka danbeeyay sanadkii 2011 oo ciidamada Kenya ay soo galeen Soomaaliya.